Fizahana Gowalla ao amin'ny Mouse House
Zoma 19 Novambra 2010 Alahady Oktobra 4, 2015 Bill Dawson
Omaly Gowalla dia nanambara fiaraha-miasa amin'ny iray amin'ireo marika lehibe indrindra eto an-tany - Walt Disney, Inc. .. Betsaka ireo tsy mino izay tsy mino media sosialy - avelao ireo fampiharana geo-sosialy toa an'i Gowalla, (Foursquare sy Facebook Places.) Ka, nahoana no misy dikany io fiaraha-miasa io?
Voalohany, misy dikany izany, satria i Gowalla dia momba ny fandraisana anjaran'ny mpampiasa! Ity serivisy ity, izay apetraka amin'ny iPhone-nao ny fampiharana azy, dia manamora ny fizahana amin'ny toerana manerana ny tanànanao sy izao tontolo izao. Ho takalon'ny fizarana ireo haunts, toro-hevitra ary sary tianao indrindra, dia omena valisoa ianao amin'ny tombo-kase ao amin'ny pasipaoronao sy ny entana virtoaly tavela any amin'ny toerana. Izy io dia fametahana geo-caching, fihazana mpihaza ary sarintany fizahan-tany - voafantina ao anaty fonosana misy sary tsara tarehy.
Ho an'ny Disney Parks, ity fifandraisan'ny mpampiasa ity dia nadika amin'ny haino aman-jery hafa mba hanitarana ny fifandraisan'izy ireo mandritra ny dia, hampiala voly ny vahiny ary hampirisika azy ireo hizaha. Tamin'ny diako voalohany tany Walt Disney World, nividy pasipaoro EPCOT aho, izay nitondra ahy tany amin'ny fivarotana fahatsiarovana ireo firenena 9 rehetra tao amin'ny World Showcase, izay ahazoako tombo-kase sy autographeo avy amin'ny mpikambana iray ao amin'ny cast. [Vakio indray ity fehezan-teny farany ity ry mpivarotra.] Notaritariko nankany amin'ny magazay 9 ny ray aman-dreniko, ho takalon'ny hajia! Ity no fiteny taloha indrindra amin'ny fananan'ny Disney - “ny mitaingina rehetra dia mifarana amin'ny fivarotana fanomezana.”
Doug ary mamporisika ny mpanjifantsika hampiasa ny fomba mahomby indrindra hampandraisana anjara ny mpampiasa sy handrefy ny fiovam-po. Ao anatin'ny tontolon'ny finday sy nomerika mihombo, maninona raha mampiasa fitaovana toa an'i Gowalla? Ao anatin'ny fanombohana, Disney dia nanome mpitsangatsangana fitsangatsanganana an-tsehatra Gowalla izay mitarika ny vahiny handeha mitaingina (sy magazay) lehibe amin'ny valan-javaboary rehetra. Ho takalony, Disney dia mahazo antontan'isa sarobidy momba ny isan'ny toerana fitsidihan'ny vahiny, izay mandeha malaza indrindra, ireo valan-javaboary mahazo ny fifamoivoizana betsaka, sns. loharanom-baovao marobe, izay ho solon'izay afaka ampiasaina hampiditra indray ny mpanjifa sy hamorona fiovam-po mahomby kokoa.
Ny haino aman-jery marketing dia miova tsy tapaka, fa ny fandraisana andraikitry ny mpampiasa dia tokony hijanona tsy tapaka. Inona avy ireo fitaovana azonao omena ny orinasa mba hanandramana hanatsarana ny fifamatorana sy ny fiovam-po?
Bill Dawson dia manam-pahaizana momba ny mailaka amin'ny mailaka sy mailaka, mifampidinika amin'ireo orinasa lehibe sy rindrambaiko amin'ny maha-mpanome tolotra amin'ny fampidirana imailaka azy ireo, ny fampiasana azy ary ny fahafahany mandefa azy. Bill dia niara-niasa tamin'ny fikambanana lehibe indrindra an-tserasera, anisan'izany Zappos ary Walmart. Izy sy ny vadiny, Carla, dia tompony ary miasa ny fahafahan'izy ireo misafidy, Famolavolana alika 4.
Ampidiro amin'ny Twitter ny Helpdesk anao